जनसत्ताबाट केबी गुरुङको प्रचण्डलाई चिठ्ठी : जनताले नि:शुल्क उपचार पाए ! » Khulla Sanchar
जनसत्ताबाट केबी गुरुङको प्रचण्डलाई चिठ्ठी : जनताले नि:शुल्क उपचार पाए !
कामरेड प्रचण्ड ज्यू, जनसत्ताको आँगनबाट न्यानो अनि रातो संग्रामी अभिवादन ।
जनताको स्वर्णिम यो दिनलाई सेतो कागजमा सजाउदै, विश्व प्रदूषणको प्रभावमा उत्पन्न हुने प्राणघातक रोगले मर्दै गरेका जनताहरुलाई नि:शुल्क उपचार ब्यवस्था जनताको संविधानमा लेख्नु भएकोमा हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु ।
विश्व बिकसित टेक्नोलोजीले निम्त्याएको पोलुशनविरुद्द नि:शुल्क उपचारलाई प्राथामिकतामा राखेर हाम्रो जनसत्ताले अनुकरणीय काम गरेको छ कामरेड । जसको भागिदार हजुर नै हो ।
जनसत्ताको आगनवाट सुखद अनुभूतिका पोकोहरु तपाई समक्ष सन्देश मुलक बनाएर पठाउदै छु कामरेड । हिजो आमुल परिवर्तनको खोजि गर्दै सल्लाको खोटोमा दियालो बालेर धुवा रहित उज्यालो खोजिरहेका जनताहरुको घर आँगनमा आज बत्ति झलमल्ल बलिरहेको छ, अनि अँध्यारोमा निसास्सिएका सुनसान औसीका रातहरुको चिरहरण भएको छ, अचेल मेरो बस्तीमा ।
पुराना गोरेटोको निसाना मेटाएर कालो कालोपत्रेले पोतिएका खुल्ला र चिल्ला सडकहरू गाउँ-गाउँमा जनताका घर दैलोभित्र छिरेका छन्, र त्यहाँ वृद्ध आमा-बाबाहरु लठ्ठी बिसाएर ह्वीलचेयरमा टोइलेट जाने-आउने गर्छन् ।
जनयुद्धमा घाइते भएर अपांग बनेकाहरुलाई स-सम्मानका साथ आरक्षणको व्यवस्था गर्नु भएको छ । तपाईले नै अघि सारेको समावेशी र समानुपातिक मुद्दाले महिला, दलित, आदिवासी जनजाती लगायतले राज्यका हरेक निकायमा आरक्षण पाएका छन् ।
१७ हजार शहिदको बलिदानी र हजारौ घाइते अपांगहरुको त्याग तपस्याले देशको मुहारै फेरिएको छ कामरेड, आखिर नेतृत्वको बैज्ञानिक कार्यदिशाको सामु यस्तो सम्भव हुने नै थियो ।
आज दूरदराजका गाउँबस्तीहरु हजुरले भने झैँ सुरक्षित र सुन्दर देखिन्छन् कामरेड । कर्णालीका जनताहरुको तुइन यात्रामा टुङ्गो लागेको छ । डोल्पाबासीहरु उकाली ओराली गर्दा केबलकार मै गर्छन् । हिजो चेपाङ बास बस्ने ओढार आज पर्यटनस्थल बनेको छ ।
बैज्ञानिक नेता कार्ल मार्क्सले आविस्कार गरेको ‘कम्युनिजम’ सिदान्तको अर्थ वर्गरहीत साम्यवादी थियो । हाम्रो जस्तो वर्ग विभाजित देशमा विभेदले घुँडा टेकेरै छाड्यो कामरेड, जुन कुरा नेपाली जनताले आफनै मौलिकतामा बन्दुकको नालबाट स्थापित गरेका हुन्, यो कुरा मैले कसरी वर्णन गरुँ ।
हिजो नेताहरुलाई मात्र राज्यकोषबाट नि:शुल्क उपचार हुन्थ्यो तर आज जनताले समेत राज्यकोषबाट नि:शुल्क उपचार पाउने भएका छन् । आमुल परिवर्तन यहि त हो कामरेड, मानवहरु सुगम र अभाव रहित बाँच्न पाए अरु के नै चाहियो र । साम्यवादी सत्ताको प्रत्याभूति नै यहि हो रहेछ ।
स्वास्थ्य र शिक्षालाई नागरिकहरुको मौलिक हकअधिकार बनाई पूर्णरुपमा निशुल्क ग्यारेन्टी गराउनु भयो र तिनै भाग्यमानी नागरिकहरु खोला टोलामा रोगको आक्रमणबाट मर्नुपर्ने युगको अन्त्य हुँदैछ ।
जनसत्ताले दिएको परिवर्तनका सामु जुम्लामा भोकमरीले मर्ने मानवहरुको सत्य कथा, अचेल दन्ते कथा जस्तो लाग्छ । देशको कृषि क्रान्तिले हरेक नागरिकलाई रोजगारको ग्यारेन्टी गरी उमेरको तहमा कम्तिमा पनि प्रतिदिन ८ घण्टा अनिवार्य श्रमको नीति अबलम्बन गराउनु भएको छ र आज श्रमले गर्दा देशको अर्थतन्त्र वृद्धि भएको छ ।
के खाउँ के लाउँ भन्दै भारत पस्ने नेपालीहरुले भारतबाटै कामदारहरु झिकाइरहेका छन् । हिजो सहयोगको नाममा भारतीय विस्तारवादले हामीलाई गुलाम बनाउँदा निरिह भएर सीमामा आँशु बग्थ्यो तर त्यो दिन आज हरायो । बरु नजिकै रहेको भारतको बिहारमा युगौंदेखि गास, बास, कपास नपाएर छटपटी रहेका अभागी भारतीय जनतालाई बर्सेनि अनुदान दिँदै उनीहरुलाई पनि खुसी दिएको छ, हाम्रो जनसत्ताले ।
अर्को गौरवको कुरा, नेपाली नागरिकता त्यागेर हिजो अमेरिका पसेका गैरनेपालीहरु नेपाल फर्किन चाहे र स-सम्मान फिर्ती हुने व्यवस्था जनसत्ताले गर्यो रे । अमेरिकाले पठाउने वार्षिक डीभी अहिले नेपालले अमेरिका पठाइरहेको छ रे । अनि अमेरिकन दक्ष जनशक्ति नेपाल भित्र्याइरहेको छ रे । उनीहरु नेपाली ग्रिनकार्ड पाउन लालायित छन् रे भन्ने सुने । यो नै साम्राज्यवादीहरु माथिको जित हो र बदलास्वरूप आज नेपालीहरुले ग्रहण गरेका छन् । कामरेड तर घमण्डले मात्तिएका छैनौ, किनभने हारमा नआत्तिनु जितमा नमात्तिनु भनेर हजुरले नै सिकाउनु भएको हो ।
हो कामरेड, एकदिन सबैको आउँदो रहेछ, आज जनताको सुदिन आएको छ । जहाँ हरेक मानवका अस्तित्वहरु बराबर भएर फुलिरहेका छन्, फलिरहेका छन् । अमेरिकी साम्राज्यवाद र भारतीय बिस्तारहरु अस्तित्वहिन भएर मौन छन् । नेपाली जनताको साम्यवादी ब्यवस्थालाई एकतन्त्रीय साम्राज्यवाद भन्दै लुकेर औला उठाउछन् रे तर खुलेआम हिम्मत भने गरेका छैनन् कामरेड ।
लुकेर हामीमाथि औला उठाउनेहरुले केहि फरक पार्नेछैन, किनकी बैज्ञानिक शास्त्र वा सिदान्तका सामु सारा दुनियाँ नतमस्तक भएको छ, इर्ष्याले आफैलाई जलाउँछ । त्यसैले उनीहरु आफै जल्ने छन् कामरेड । हिजो नेपाली सामन्तीहरु माथि जित्नेहरुले आज संसार जितेका छौ !
कामरेड हजुरलाई भन्नैपर्ने एउटा कुरा यो छ…
टिरिंग-टिरिंग विहानको आलाराम बज्दा झल्याँस्स ब्युझिएँ । थुक्क जिन्दगी ? प्रवासको मरुभूमिबाट सपना पो देखिरहेछु, चिठ्ठीको बिट मार्न नपाउँदै आलारामले उठाइदियो । प्रवासको खाडीमा ड्युटी जाने समय बताउँदै जनसत्ताको मिठो निन्द्राबाट घडीले उठ् भनेर आलाराम पो ठोके छ ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्ड ज्यू । आज यस्तै सपनामा बेतित छन् परिवर्तन चाहाने नेपालीहरु । तपाई दोस्रोपटक सत्ताको नेतृत्वमा हुनुहुन्छ, अनि सत्ताको मालिक हुँदा तपाईको कासनमा बन्दुकको ट्रिगर दबाउने हजारौ योद्दाहरू खाडीमा कसैको गुलाम गरिरहेका छौँ । यतातिर जनाउ, यी सब आफ्नै बाध्यता र परिस्थितिका गुलाम होलान् ।
तर एउटा कुराले सारा नेपालीलाई सताएको छ प्रधानमन्त्री ज्यू ! पूर्वराष्ट्रपति रामवरण यादव ज्यूलाई उपचारका लागि पेश्कीस्वरुप ६० लाख राज्य कोषबाट दिनुभयो रे !
कालो कानुनका विरुद्द लड्ने आदरणीय कामरेड नै आज प्रधानमन्त्री हुँदा समेत त्यहि विभेदकारी कालो कानुन हजुरसँगै सिँहदवारमा जुरो ढक्काएर बसेको छ हगी कामरेड ?
राज्यको ढुकुटीबाट ६० लाख पेश्कीस्वरुप पूर्वराष्ट्रपति रामवरण यादव ज्यूलाई निशुल्क उपचार, तर गाउँका जनतालाई सिटामोल समेत नपाएर मर्ने ब्यवस्था नै कालो कानुनको हो प्रधानमन्त्री ज्यू । जुन कानुन हजुरसँगै पाँचतारे होटल धाउँछ अनि चिल्ला सडकमासँगै पजेरोमा गुड्छ र त जनता गाउँमा नांगै छन् ।
खोइत हजुरले देखाएको साम्यवादी सपना कामरेड ? “जहाँ वर्गहरुको समुल नस्ट हुनेछन् र सारा जनतालाई समान अधिकार लागू हुनेछ । त्यो नै साम्यवादी ब्यवस्था हुनेछ” यहि सपना र बाचा थियो होइन र ? आज तपाई प्रधानमन्त्री हुँदा उस्तै पुरानो चरित्र र स्वरुपमा जनतालाई साशन गर्नु विडम्बना होइन ?
के राज्यको ढुकुटी नेताहरुको मात्रै उपचार बिमा हो प्रधानमन्त्री ज्यू ? यहि विभेदका बिरुद्ध जनताका छोरा-छोरीहरु लडेका हुन् । साम्यवादी सपना देखाएर सामन्तीको भरणपोषण गर्ने कथित हर्कतले आज विश्वका माओवादीहरु नै बेज्जत हुँदैछन् । यो बेज्जतिको सफाया कसले दिन्छ कामरेड ?
क्यान्सर जस्तो प्राणघातक रोग उपचारका लागि सरकारले निशुल्क खर्च बेहोर्ने सरकारी निर्णयप्रतिको विरोधमा मैले यसरी कलम चलाइरहनु अमानवीय हुन्छ तर समानताको लागि कलम चलाउनु मलाई धर्म पनि हुन्छ ।
त्यसकारण, यो देशको राष्ट्र प्रमुखले राज्यबाट प्राणघातक रोग क्यान्सरको निशुल्क उपचार पाउछन भने आम सर्वसाधारणले पनि निशुल्क उपचार पाउने ब्यवस्था गरियोस्, यो नै समानताको लागि अग्रगामी कदम हुनेछ प्रधानमन्त्री ज्यू ।
नेपाली राजनीति भनेको नेताहरुको संरक्षणका लागि बनाइएको जीवन बिमा जस्तो नबनाइयोस्, यो देशको सासन ब्यवस्था नेताहरुको लागि मात्र सुविधा भोग गर्ने थलो जस्तो नबनाइयोस् र राज्यकोषलाई केवल नेताहरुको उपचार बिमा कम्पनि जस्तो नबनाइयोस् । यो आम नेपाली जनताको आग्रह हो । राम्रो कार्यको थालनी गर्न सुनौलो अवसरहरु तपाईको ढोका अगाडि पर्खेर बसीरहेका छन् । मात्र हिम्मत गर्नुहोस् प्रधानमन्त्री ज्यू, जनताले हिजो पनि साथ दिएका थिए, आज पनि साथ दिनेछन् ।
– केबी गुरुङ